iCameroom ibeth’ iBurkina Faso emdlalweni wokuvul’ iAFCON!
Gv of the Opening Ceremony during the 2021 Africa Cup of Nations Afcon Finals football Opening Ceremony at Olembe Stadium in Yaounde, Cameroon on 09 January 2022 ©Muzi Ntombela/BackpagePix
Pedro Mapelo | January 9, 2022
Abalandeli bebhola eCameroon bancume olikabhulankethe emva kokuba ilizwe labo libethe iBurkina Faso ngamagowuli amabini kwelinye (2-1) emdlalweni wokuqala we-Africa Cup of Nations (2022 Afcon) ngorhatya lwanamhlanje. Noxa iBurkina Faso itsazise igazi kuqala emdlalweni ngebhola entle efakwe nguGustavo Sangare ofumene ibhola ebigotywe ngobuchule nguTraore. Oku kwenzeke emva kwesiqala somdlalo ebesipholile. Khange kuthathe ntlantsi kwade kwakho igowuli lokuqala emdlalweni. Isigaba sokuqala siphele amaqela entanganye ngoba iCameroon ebilandela ngasemva ikwazile ukufumana igowuli lokulinganisa.
Emva kongenelelo kweVAR, esetyenziswe okokuqala kwi-Afcon, iCameroon ifumene ipenela emva kokudlalwa kakubi kuka-Andre-Frank Zambo Anguissa. Ipenela ibekwe emnatheni nguVincent Aboubakar. Isiqalo sesiqingatha sesibini sibenawo umahluko kwesokuqala ngoba amaqela ebekhangela igowuli lokuphumelela emva kokuvala esokuqala elingana ngelinye macala. Khange kube kudala kwisigaba sesibini, iCameroon ifumene enye ipenela emva kokubhutyuza komdlali weBurkina Faso emhlabeni kanozinti. Uyivalele emnatheni neyesibini uAboubakar obenguKapteni weCameroon esingethe iAfcon emisiweyo kunyaka ophelileyo ngenxa yeKhorona esube imiphefumlo yezigidi zabantu kwihlabathi ukusukela oko yathi yaqhambuka eChina ngonyaka ka-2019.
Emva koko iCameroon iwuthathele kuwo umdlalo ngoba iBurkina Faso ibingasenawo amandla. Iye yalifumana igowuli lesithathu – kodwa abeVAR abalivumanga. Noxa iCameroon ingadlalanga umdlalo osemgangathweni ophezulu – kodwa amanqaku amathathu aza kuwenza umahluko emidlalweni elandelayo. Itumente ivulwe ngokusesikweni ngumongameli waseCameroon nomongameli weCAF, uGqirha Patrice Motsepe, emalanga namhlanje. Iqela elitshatsheleyo ekupheleni kwetumente liza kugoduka nezigidi ezihlanu zedola yaseMelika ($5-million) okokuqala kwi-Afcon. Isigqibo sokunyuswa kwemali sithathwe sisigqeba esilawula iCAF ekuqaleni kwale veki.